NFT အစီရင်ခံစာ- 2021 သည် ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုနှစ်ဖြစ်သည် - Cazoo
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » NFT အစီရင်ခံစာ- 2021 သည် ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုနှစ်ဖြစ်သည်။
tag ကို: ethereum, lavalabs, ကျောက်တံတား, NFT
NFT ကမ္ဘာအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော နောက်ဆုံးပေါ် Nonfungible အစီရင်ခံစာကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ပြီးပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Nonfungible ကို ယုံကြည်ပါသလား။ ငါဘယ်သူလဲ? Decentraland ၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အရောင်းအ၀ယ်များကို ခြေရာခံရန် 2018 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် ယနေ့ခေတ် NFT စျေးကွက်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောဒေတာနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာကိုးကားချက်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ် Non-Fungible Token ဂေဟစနစ်၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၎င်းတို့သည် Ethereum blockchain တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှုများကို ခြေရာခံပြီး NFT ဝါသနာအိုးများ၊ ဝေလငါးများနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် NFT စျေးကွက်များ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို စောင့်ကြည့်ရန် ကူညီပေးသည့်ကိရိယာများ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အစီရင်ခံစာသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီလိပ်စာသို့. အချက်အလက်က မလိမ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့၏ Q2 အစီရင်ခံစာသည် Ethereum ကွင်းဆက်ရှိ NonFungible Token လမ်းကြောင်းများကို စစ်ဆေးသည်။
ဤရှုပ်ထွေးသောသုံးလပတ်အတွင်း NFT လုပ်ငန်းသည် NFT အသိုက်အဝန်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်အသုံးပြုသူအသစ်များနှင့်အတူ ကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သည့်သုံးလအတွင်း၊ ပင်မမီဒီယာသည် NFTs များကို အောက်ခံခုံပေါ်တွင်တင်ထားကာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကို ကောင်းစွာထိတွေ့နိုင်စေသည့်အပြင် မှင်စီးဆင်းမှုကို အားပေးကာ အနုပညာရှင်အသစ်များနှင့် ပရောဂျက်များကို မွေးဖွားပေးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည်။
မီးပွိုင့်အားလုံး အစိမ်းရောင်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
ယမန်နှစ် သို့မဟုတ် ယခင်သုံးလပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒေါ်လာများ ပိုမိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဝယ်ယူသူနှင့် ရောင်းချသူ အရေအတွက် တိုးလာပြီး တက်ကြွသော အပတ်စဉ် ပိုက်ဆံအိတ်များ တိုးလာခဲ့သည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည် 2020 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက NFT နှင့် cryptocurrency လုပ်ငန်းများအတွက် ခိုင်မာသောတိုးတက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
USD ပမာဏသည် သုံးလပတ်အစတွင်ထက် နိမ့်နေသော်လည်း အရောင်းပမာဏမှာ အားကောင်းလာပါသည်။ စုဆောင်းနိုင်သော အပိုင်းသည် ဤသုံးလပတ်တွင် စျေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ မေလတွင် USD ပမာဏ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် သားလောင်းများ၏ Meebits ပရောဂျက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကဏ္ဍအားလုံးတွင် အသုံးအဆောင်ကဏ္ဍသည် လွန်ခဲ့သည့် သုံးလအတွင်း အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤ NFT အသုံးပြုမှုကိစ္စများသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိသဖြင့်၊ ဤအချက်ပြမှုသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ဂရုတစိုက်စဉ်းစားကြသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးBinance NFT Marketplace - ဆာဗေးဒေါဒါးမှအန်ဒီဝါ့ခ်ျမှစုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများ
လာမယ့်ဆောင်းပါးNFT- နောက်ထပ် 100x ကိုရှာဖွေရန် ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်။